Yakawanda Sei Inodonha Mazino Inodhura muTurkey? Kurapa Mazino Kunze - Cure Kutsvaga
Mazino Ekurapa Mazino Kugunzva
Yakawanda Sei Inodhura Mazino Inodhura muTurkey? Kurapa Mazino Kunze Kwenyika
7 June 2021 7 June 2021 mushongabooking
Zvinodhura zvakadii kuita kuti mazino ako achene muTurkey?
Usati wawana chero rudzi rwemazino kurapwa muTurkey, iwe unofanirwa kugara uchibvunza kana iwe uri mukwikwidzi akanaka. Saka, kuve akakwana mukwikwidzi wemeno akachenesa muTurkey, unofanirwa kusangana nezvimwe zvinhu.
Kunyangwe machena mazino machena muTurkey iri chiitiko chinoshanda kwazvo, haisi yemunhu wese. Kuchenesa kwemeno, semuenzaniso, kunoshanda chete kumatope ekunze (ayo ari kunze kwezino), kwete mavara emukati akadai sekusviba kwetetracycline, iyo inogadzirwa nekuratidzwa kune uyu mushonga unenge uri mudumbu.
Usanyengerwe nezvakawanda zvekuzviitira iwe pachako zviwanikwa zviripo. Meno echokwadi machena anowanikwa chete kunzvimbo yemazino, uye hazvikurudzirwe kana iwe uine zvimwe zvehutano zvemazino, senge chingamu chirwere, nekuti zvinogona kuita kuti mazino ako nemeno zvive zvakanyanya.
Kana iwe uchiputa kwemakore uye uine meno anononoka uye matadza, unogona kunge usiri mukwikwidzi akanaka wemeno akachenesa muTurkey. Kana iwe uchida kurega kusvuta, unogona kuwana kurapwa uku. Nekudaro, kana meno ako akanyatso kushatiswa kuti ubatsirwe nemazino ekuchenesa maitiro, chiremba wemazino anogona kukurudzira dzimwe sarudzo senge denture kana veneers muTurkey.
Ndeapi Mazino Ekuchenesa Marapirwo Anowanikwa muTurkey?
Kuchenesa mazino ekugezesa, semuenzaniso, anowanikwa pamusoro pekambani. Kunyangwe nekugara uchishandisa, ivo havana yakawanda yekuchenesa maitiro.
Chiremba wemazino-akapa machena machena ekushandisa pamba. Aya anoshanda zvine mwero uye anozopenya meno ako zvishoma. Iwe unozofanirwa kuve nekuratidzwa kwemazino ako akatorwa, ayo anozotumirwa kune labhu uko matireti akagadzirwa-akabata jeri remheni anozoiswa pamusoro pemeno ako. Vanhu vazhinji vanosarudza kurapwa uku sekuwedzera kune laser mazino machena kuitira kuti vachengetedze meno avo achene kwenguva yakareba.
Muhofisi yemeno, machena machena machena anoitwa. Mhando, dzakadai seyakakurumbira BriteSmile® uye Zoom! ® inowanikwa muTurkey, pakati pemamwe akawanda masisitimu ane mbiri.
Meno Kuchenesa muTurkey Inoshanda Maitiro eVashanyi Vemazino?
Varwere vazhinji vemazino vanotsvaga kurapwa kunze kwenyika kuchengetedza mari pakuvhiya kwavasingakwanise kutenga kumba. Nepo machena machena machena asingazokuserere iwe mari yakawanda sezvipenga kana veneers, ichave yakanyanya kudhura pane kuita maitiro anoitwa pamba.
Chimwe chikonzero iwe chaunogona kusarudza kuenda laser mazino machena muTurkey uchiri pazororo nekuti maitiro acho anokurumidza. Hauzotambise yakawandisa nguva yako yezororo nekuti hapana akawanda mhedzisiro (kunyangwe vamwe vanhu vachitaura meno akaomarara kwezuva kana maviri mushure mekurapwa, asi izvi hazvisi zvechigarire.)
Maitiro eRedhiyo Mazino Kuchenesa sei muTurkey?
Nhamba Yekushanya Kwamazino: 1 nguva
Nguva Yekuchenesa Mazino: Approx. Maawa maviri
Chiremba wemazino anoshandisa chati yemumvuri kuti aongorore ruvara rwemazino ako usati waitwa maitiro ekuona kuti vakareruka zvakadii mushure mekurapwa.
Kuti ubvise tartar uye chero mavara anooneka, kurapwa kwako kuchatanga nekuchenesa kwakakwana kwemeno ako. Nekuti gelisi rekuchenesa rinofanira kungoshandiswa pamazino, dhamu rerabha richaiswa rakatenderedza ivo kuchengetedza matadza nerurimi. Zvidziviriro zvekudzivirira zvichapfekwa pameso ako kuti uzvidzivirire kubva kumagetsi akasimba emalaser.
Iyo gel yekubvisa inozoiswa kumeno ako, uye laser danda rinoshandiswa kumisikidza machena machena mujeri. Iyo jeri inobviswa, uye zvinoenderana nehunyanzvi hwunoshandiswa nachiremba wako wemazino, maitiro acho anogona kudzokororwa kakawanda. Semuenzaniso, mamwe masisitimu anongoda kushandiswa kumwechete kwejelisi, iyo inosara pamazino kwemaminetsi makumi mashanu nemashanu.
Chiremba wemazino achachenesa mazino ako zvakare kubvisa zvisaririra zvejelisi uye achabata chati yemumvuri kumeno ako kuti uone kuti mangani emashizha akasiyana kana gel rese rabviswa (kusvika pagumi nemana). Mazino ako anozove akachena kuchena kunyangwe usinga bude kunze.
Yakawanda Sei Laser Mazino Kuchena muTurkey Yepamusoro uye Yakadzika Shaya?
Ivhareji yemutengo wekuchenesa zino muTurkey i $ 290. Makiriniki edu emazino anovimbwa anokubhadharisa mazana maviri emadhora yekumusoro uye yepazasi shaya laser mazino machena muTurkey. Iwe zvakare uchawana makore mashanu evimbiso pane ese marapirwo emazino aunowana unova mukana wakakura wausingakwanise kupotsa.
Kuwedzera kune laser mazino machena, iwe unogona zvakare kuwana yekuchenesa imba kit futi. Mutengo wekitchen yekuchenesa imba muTurkey ingori £ 150. Pamhando iyi yekurapa, Chiremba wemazino anoda kushanyirwa kaviri. Maonero anotorwa pane yako yekutanga kugadzwa uye anotumirwa ku laboratori, uko matireyi anokwana pamusoro pemeno ako akagadzirwa.
Iwe uchanhonga matireyi uye nekuchenesa gel pakushanya kwako kwechipiri. Maitiro ekuti uashandise acharatidzirwa nachiremba wako wemazino. Muchidimbu, shoma gel rinosundidzirwa pamwe chete nehurefu hwemateyi ese ari maviri asati aiswa pamusoro pemeno ako. Vazhinji varwere vanogashira mavhiki maviri ejeli, iyo yavanoshandisa husiku hwese kwemavhiki maviri, kana kusvika vagutsikana nemhedzisiro inochenesa. Mamwe gel anowanikwa kubva kune wemuno wemazino.
Mutengo Kuenzanisa kweLaser Mazino Kuchena muTurkey vs Dzimwe Nyika
United Kingdom nyika dzakabatana Kanadha Ositireriya Nyuzirendi Teki
£ 400 £ 500 £ 650 £ 650 £ 700 £ 250
Iwe unogona kuona kuti iyo laser meno ekuchenesa mitengo kunze kwenyika inokwana kusvika katatu inodhura kupfuura Turkey. Neiyi nzira, iwe unenge uchinge uchichengetedza mari yakawanda, asi ramba uchifunga kuti mamwe marapirwo emazino senge anodyara kana veneers muTurkey anogona kukuita iwe chengetedza zviuru zvemari.
Ko Laser Mazino rakanga rachena Cheap uye High Quality muTurkey?
Ehe, zvakawandisa. Vanachiremba vemazino muTurkey vakanyatsodzidziswa sevaya vari muUnited States, vachitevera mutemo wepasi rose unogamuchirwa wehutsanana nemitemo yekuchengetedza. Makiriniki edu emazino akanakisa muTurkey anoshandisa zvishandiso zvakafanana uye zvinhu zvinoshandiswa nachiremba wemazino kumba.
Izvi hazvireve kuti haufanire kuita zvako wega uye uve nechokwadi chekuti kiriniki yauri kuenda yakavimbika. Tinonzwisisa izvozvo kuita kuti mazino ako achene muTurkey apo pazororo kunonetsa, saka takaita kuti zvive nyore nekuunza pamwe chete makiriniki akanakisa muTurkey pane zvaunoda, mazhinji acho akaiswa padyo padyo nenzvimbo dzinozivikanwa dzekushanya dzakadai seAntalya, Kusadasi, Izmir neIstanbul.
Nei Ndichifanira Kusarudza Turkey YeMeno Kuchenesa Maitiro?
Mahombekombe anoshamisa eTurkey akaita kuti ive nzvimbo inozivikanwa yezororo revashanyi veBritain vachitsvaga zuva reMediterranean. Kune avo vanoshuvira kuona zvishoma pazororo ravo, nhoroondo yakapfuma yenyika uye zvisaririra kubva pamazera apfuura zvinonakidza zvakare. Istanbul, rimwe remaguta anoshanyirwa zvakanyanya papuraneti, anowanzo kuve anodikanwa nevanopwanya maguta. Vafambi vemahombekombe vanozowana isingagumi nzvimbo dzekushanya pamwe neAegean kumahombekombe egungwa, nenzvimbo dzemazino muAntalya, Izmir, uye Kusadasi. Chero mhando yezororo iwe yauri kutsvaga, Turkey inogona kukupa iwe yepamusoro yemazino kutarisirwa pamwe nekuzorora uye kupora.
udza mashoko Rapa Kubhuka kutora iyo yakanyanya kudhura laser mazino machena kana chero mamwe marapirwo emazino pamitengo yakaderera aine chakakosha dhisikaundi zvakare.
Yakawanda Sei Kuwana Mazino Akacheneswa Mutengo muIstanbul, Turkey?
Zuva rimwe chetero Mazino Anodyara muTurkey
Ndeapi maVeneers eMeno?
Ko Korona Pamazino Ipfungwa Yakanaka?
Zvese pa4 Mazino Anodyara Kurapa muTurkey
Ndeipi Avhareji Mutengo wemazino Korona muTurkey?
← Kuisa Mazino Kudhura muMexico: Kufananidza kweTurkey
Yakawanda Sei Kuwana Mazino Akacheneswa Mutengo muIstanbul, Turkey? →